DEG DEG: DF Somalia oo si ”xooggan uga hortimid” qorshe lagu ballaarinayo Howlgalka AMISOM | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka DEG DEG: DF Somalia oo si ”xooggan uga hortimid” qorshe lagu ballaarinayo...
DEG DEG: DF Somalia oo si ”xooggan uga hortimid” qorshe lagu ballaarinayo Howlgalka AMISOM
(Muqdisho) 12 Okt 2021 – DF Somalia ayaa si “adag uga hor timid” hindise ay isku raaceen QM iyo Midowga Afrika oo lagu barxayo Howlgalka AMISOM oo lagu soo darayo qayb QM ah.
War Saxaafadeed aan si saaxi ah loo akhrin karin oo kasoo baxay Wasaaradda Gaashaandhigga Somalia ayaa hindisahan lagu diidey, waloow ay AU horay u sheegeen inay arrintan kala hadlayaan DF Somalia.
Taariikhda bilowga howlgalkan loo qorsheeyey ayaa ah horraanta sanadka soo aaddan ee Jannaayo 2022-ka.
Hoggaanka DF Somalia ayaan nasiib darro muujinin siyaasad jihadeeda la fahmi karo oo ku saabsan sida loo dhisi karo ciidamo wax ku ool ah oo Soomaaliyeed oo amaanka la wareega, iyadoo waloow ay sexeen inay si joogto ah u bixiyaan mushaharooyinka ciidamada, misna ka fursan waayey inay siyaasad iyo dano gaar ah u adeegsadaan ciidamo yar oo la siiyey tababarro caalami ah.
Hoos ka eeg War Saxaafadeedka oo aannu ka cudur daaranaysno inuu ku qoran far aad u tayo xun…
Previous article”Waa inaan u midownaa xoojinta dowladnimada!” – Maalinta Calanka Somalia oo la maamuusay + Sawirro
Next articleDEG DEG: Maxkamadda caalamiga ah ee Cadaaladda Adduunka ee ICJ oo bilowday geeddi-socodka go’aankii la sugayey – DAAWO